पहिरोमा परी एकै घरका तीनको मृत्यु « प्रशासन
बागलुङ । भिषण वर्षापछि गएराति गएको पहिरोले घर बगाउँदा एकै घरका तीनजनाको मृत्यु भएको छ ।
गलकोट नगरपालिका–७ को बाँस्खोला, आँगाखेत र वडा नं. ३ हटियामा पहिरो खस्दा लोकमार्ग अवरुद्ध बनेको हो । जिल्लाको पश्चिम भेगबाट छोटो तथा लामो दूरीमा चल्ने यातायात रोकिएको जनाइएको छ । गलकोट क्षेत्रका अधिकांश ग्रामीण सडक पनि पहिराले अवरुद्ध बनाएको वडा नं. ३ का अध्यक्ष वीरजंग भण्डारीले बताए ।
“ठाउँठाउँमा गएको पहिराले मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्घ छ,” अध्यक्ष भण्डारीले भने, “पहिराले अन्यत्र पनि भौतिक क्षति पु-याएको खबर आइरहेका छन् ।”